Ukuhlaziywa kwesihlalo sekhompyuter seLOTUS | Iindaba zeGajethi
Ukujonga kwakhona isihlalo sekhompyuter seLOTUS
IiVillamandos | | ngokubanzi, Reviews
Abo kuthi basebenza iiyure ezinde phambi kwekhompyuter bayakwazi ukubaluleka kokuhlala kakuhle, kodwa noku ube nesihlalo somgangatho olungileyo esivumela ukuba sihlale kakuhle kwaye sisebenze ngendlela efanelekileyo. Kwezi veki zidlulileyo ndise-ofisini apho ndibhale khona onke amanqaku am, ndinomntu endisebenza naye, oza kuhlala apho asebenze khona, enkosi Ofisillas osinike ukuba sivavanye esinye sezitulo zeofisi yakhe.
Kwimeko yam bandithumele imodeli Umdlalo weLOTUS emi ekuboneni kwayo uyilo, luhlaza okwesibhakabhaka. Kwakhona ayisiyiyo yonke into ephela kuyilo, kuba nje ukuba uhlale phantsi uyaqonda ukuba utyalo-mali kwesi sihlalo kufanelekile. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngeenkcukacha, qhubeka ufunda kuba kweli nqaku siza kukuxelela ngamava ethu nangoluvo lwethu malunga nosihlalo weofisi.
Phambi kokuqala ukuhlalutya esi sihlalo, kufuneka ndikuxelele ukuba ungajongi amaxabiso kwaye leyo yeyokuba ukuba uchitha iiyure ezininzi njengam ndihleli eofisini okanye phambi kwekhompyuter, uyakufuna isitulo esihle, hayi Ngaba ubhatale ntoni, okanye ngaba imali ibaluleke ngaphezu kwempilo yakho?
2 Ukusebenza kwesihlalo
4 Izimvo ngokukhululekileyo
Ngokubhekisele kuyilo lwesihlalo, akukho ndlela ibhetele yokukubonisa yona ngaphandle kwemifanekiso embalwa onokuthi uyibone isasazeka kwinqaku lonke. Nangona kunjalo kufuneka songeze loo nto Sihlalo sokwenyani sokudlala esineentsimbi ezigqityiweyo kunye nokugqitywa kwesikhumba kunye nomnatha wokuphefumla omnyama nohlaza okwesibhakabhaka ngokwahlukeneyo..
Uyilo liyi-ergonomic ngokupheleleyo, kwaye kwimeko yam ukuba ndimde ngokwendalo, ihlala kakuhle emqolo nasemzimbeni ngokubanzi. Enye yezinto endizithandayo ngaphandle kwamathandabuzo kukungqengqwa kwayo okungasemva kunye nokubanakho kokususa indawo yokubamba iingalo ngamanye amaxesha xa kusebenza kunokuba nzima.
Andizukuxoka kuwe, kodwa uninzi lwezihlalo zolu hlobo esizifumana kwintengiso zisivumela ukuba senze imisebenzi efanayo. Nangona kunjalo, uninzi lwazo lwahlukile kuyilo, olukule meko lungaphezulu kokulungileyo kwaye ndingaphantse ndithethe ngokumangalisayo.
Kule modeli yeLOTUS sifumana I-lever eqhelekileyo emazantsi esivumela ukuba silungelelanise ukuphakama kwesihlalo ukusuka kwiisentimitha ezingama-46 ukuya kuma-55 eesentimitha ubuninzi. Sikwanokukhetha ukungqengqa esihlalweni ukuze sihlale ngokweemfuno zethu.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, enye yezona zinto zilungileyo esizifumeneyo zihlala kwiindawo zokubeka iingalo esinokuziqokelela ukuze zingasikhathazi ngamanye amaxesha.
Apha sikubonisa ifayile ye- Eyona nto iphambili kwesi sihlalo seKhompyuter yeLOTUS;
Isixhobo: Isikhumba sokwenziwa kunye nomnatha, omnyama nohlaza okwesibhakabhaka ngokwahlukeneyo
Umbala: Luhlaza okwesibhakabhaka, nangona kwiwebhu siza kufumana iinguqulelo eziluhlaza okwesibhakabhaka, bomvu, luhlaza, orenji, mnyama, ngwevu namhlophe
Ukuphakama kwesihlalo: 46 - 55 iisentimitha
Ububanzi besihlalo: iisentimitha ezingama-50
Ubunzulu besihlalo: iisentimitha ezingama-51
Ukuphakama komva: 78 cm
Iingalo: zibandakanya indawo yokubeka izandla kunye nokusonga
Amavili: 11mm x 50mm mat ekhethekileyo ebandakanywayo
Ubunzima obukhulu obunokuxhathisa: i-110 kilogram
Ubunzima: 16 kg
Iwaranti: iinyanga ezingama-24
Esi sihlalo sekhompyuter seLOTUS singathengwa kwii-isillas kwi ikhonkco elandelayo. Ixabiso layo ngu I-139.90 i-euro ngokuhanjiswa kwasimahla ekhaya Oko kuyakusenza ukuba sifumane iodolo yethu ngexesha eliya kusuka kwi-3 ukuya kwiintsuku ezi-5.
Kwimeko yethu sihleli nohlobo lwesihlalo ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kodwa kwiwebhusayithi esele sikunike yona, ungayifumana ngemibala eyahlukeneyo ekhoyo, ngakumbi ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, oluhlaza, orenji, mnyama, ngwevu noMhlophe . Ukongeza, kwiwebhu kukho inani elikhulu leemodeli ezahlukeneyo zezitulo, zazo zonke iintlobo kunye nezinye izincedisi zeofisi ngokuqinisekileyo eziza kutsala umdla wakho nje ukuba ujonge.
Owona mzuzu unzima kuhlalutyo ngalunye lwesixhobo okanye imveliso ufikile kwaye kukunika uluvo lwethu. Okokuqala, kufanele kuqatshelwe ukuba isitulo samkelwe ekhaya ngaphandle kokuxhonywa, into enokubonakala ingaqhelekanga kodwa iqhelekile njengoko iyimveliso enkulu kakhulu. Indibano ilula ngokwenyani, nangona kuya kuthatha ixesha ukuhlela ezi ndawo kwaye uzidibanise ngendlela echanekileyo.
Ngokuphathelene nokuthumela ngenqanawa kufuneka nditsho ukuba kwakukhawuleza kakhulu kwaye yonke into yeza ebhokisini ipakishwe kakuhle, nangona yeyiphi enye yeendawo zokubeka iingalo eyabethwa kakhulu. Kunjalo Ukusuka e-Ofisillas, yonke into yayilula ukwenza utshintsho, into ebaluleke kakhulu, nangona kwimeko yam ekugqibeleni igqibe ekubeni ingayitshintshi imveliso. Oku kusivumele ukuba sazi ukuba iwaranti ebonelelwa ngumenzi isebenza ngokuchanekileyo kwaye kwimeko yayo nayiphi na ingxaki esinokuba nayo, sifumana impendulo ekhawulezileyo nangaphezulu kwayo yonke into esebenzayo.
Ngoku eyona nto ibalulekileyo iza kwaye nangona imvakalelo yokuqala xa ndihleli yayimbi kakhulu, yonke into yatshintsha xa ndihleli iintsuku ezininzi. Kwaye ngaba uqhele isitulo esibi kakhulu esisele sonakele kakhulu, utshintsho kwisitulo sokwenene sasinzima kakhulu, kuba umzimba wam wawucinga ukuba kuyinto eqhelekileyo ukuhlala kwinto enzima kwaye ungonwabisi kwaye ungahlali kwinto ethambileyo kwaye ekhululekile.
Kude kube namhla kwaye emva kweentsuku ezininzi ndisasebenzisa esi sihlalo, okwangoku andinakukutshintsha kwesinye. Kananjalo, uninzi lwenu olukrokrelayo, uyilo lwesi sihlalo lufezekile eofisini yam, luzele yingxubevange apho esi sihlalo seLOTUS simi ngaphezu kwayo yonke into.
Ucinga ntoni ngesihlalo seKhompyuter seLOTUS esiyihlalutye namhlanje kweli nqaku linomdla?. Sitshele ukuba ucinga ntoni ngosihlalo esiye sahlalutya namhlanje kwaye ukuba ucinga ngokufumana okufanayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Ukujonga kwakhona isihlalo sekhompyuter seLOTUS
Abavelisi abakhulu abayi kusungula ii-smartwatches kulo nyaka
I-Apple ibonisa ubuhle be-iPhone 7 Plus kwintengiso engaqhelekanga